Onye ozi: German ọ bụla ga-agba ọgwụ mgbochi, gwọọ ma ọ bụ nwụọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Onye ozi: German ọ bụla ga-agba ọgwụ mgbochi, gwọọ ma ọ bụ nwụọ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Onye minista ahụike nke Germany Jens Spah
Dị ka onye ozi ahụ si kwuo, a ga-agba onye ọ bụla nọ na mba ahụ ọgwụ mgbochi ma ọ bụ dabara na coronavirus n'ọnwa ndị na-abịa.
Mịnịsta na-ahụ maka ahụike nke Germany Jens Spahn, taa gbara onye ọ bụla ume ka a gbaa ya ọgwụ, mana ọ nọgidere na-enwe obi abụọ banyere ime ka ogbunigwe ahụ bụrụ iwu. Onye ozi ahụ kwuru na a ga-enweta ọgwụ mgbochi anụ ụlọ, na "ọ nweghị ọgwụ mgbochi mmanye ga-emebi oke a" nke ọrịa.
"Ma eleghị anya na njedebe nke oge oyi a, dị ka a na-ekwu mgbe ụfọdụ n'ụzọ nlelị, mara mma nke ukwuu onye ọ bụla nọ na Germany ga-agba ọgwụ mgbochi, gwọọ ma ọ bụ nwụọ," Spahn kwuru.
Spahn kwuru okwu ya dị ka ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-eduga, gụnyere ndị sitere na Chancellor Angela Merkel na-apụ apụ Christian Democratic Union (CDU), na-akpọ oku maka ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ụmụ amaala niile n'agbanyeghị ịrị elu nke ọrịa COVID-19.
Onye isi ala Bavaria Markus Soeder kwuru na Fraịde ọnụọgụ ọrịa ọrịa ụbọchị asaa 'gbapụrụ n'elu ụlọ' n'etiti ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi.
"Ekwenyere m na n'ikpeazụ, anyị agaghị enweta ọrụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa n'ozuzu," ka o kwuru.
Ejiri arụmụka yiri nke ahụ n'oge na-adịbeghị anya onye ndu Europe ọzọ, Prime Minister Hungarian Viktor Orban. Mgbe ọ na-agwa redio Kossuth okwu na Fraịde, ọ baara ndị anti-vaxxers iwe, na-akpọ ha ihe iyi egwu na-ekwu na ha "ga-amata na a ga-agba ha ọgwụ ma ọ bụ nwụọ."
Ọ ga-abụ MacPheat ekwu, sị:
November 22, 2021 na 18: 02
1. "Mgba ọgwụ mgbochi" anaghị enye gị ihe mgbochi ma ọ dị ka ọ ga-ewe naanị ọnwa 6.
2. Ọ bụ ihe a ma ama tupu covid-19 wee nabata na ọ na-eme site na ọgwụ mgbochi covid-19 na ọgwụ mgbochi na-enyeghị ihe mgbochi na-agba ume ka nje ahụ gbanwee n'ụdị dị egwu.
3. Ya mere, ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-ebute ọrịa na-efe efe ọ bụghị nke a na-enyeghị ọgwụ mgbochi.
4. Ekwupụtakwara nke ọma ugbu a na idowe ọkwa ọbara nke 50 nanograms kwa milliliter nke vitamin D ga-ewepụsị ohere ọ bụla nke ọrịa siri ike ma ọ bụ ọnwụ sitere na covid-19.
5. Anyị enwebeghị ụzọ anyị ga-esi mara ihe mmetụta mgbochi nke ọgwụ mgbochi ahụ bụ. Otú ọ dị, o doro anya na ndị mmadụ anwụọla site na ha na ikekwe karịa ka anyị maara na ndị mmadụ na-enwe mmetụta ahụike na-adịghị mma site na ha.
6. Nke a niile nwere ike ịnakwere ma ọ bụrụ na enweghị ụzọ dị ọnụ ala ma dịkwa nchebe.
Nhọrọ a bụ vitamin D. Ihe kwesịrị ime ma ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị ọrụ ahụike ọha na eze na-emesi ike mkpa ọ dị onye ọ bụla ịkwalite vitamin D ha. Nke a pụtara ịnara 4,000 ruo 10,000 IU kwa ụbọchị.